CEC Inverness - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Degree Dugsiga Sare Codso Now! CEC4me!: La kulan Clark! Baro Sida CEC u ahaa
Xulasho Sax ah Clark! La kulan Clark! Isqorista Hada Waxay Furan Tahay FALL 2021 Hano Kulliyad Dayn-Bilaash ah
Degree Dugsiga Sare Codso Now!
Ku soo dhowow Dugsiga Sare ee CEC Inverness!
Isku-xirka Kulliyadaha Hore ee Colorado (CECI) waxay albaabada u furtay 2020 iyada oo ah bilaash-bilaash ah, isdiiwaangalinta furan ee isdiiwaangalinta dadweynaha. CECI waxay bixisaa jawi shaqsiyeed oo taageero leh halkaas oo ardaydu ay awood ugu yeelan karaan inay hiigsadaan himilooyinkooda waxbarasho iyo shaqsiyeed ee gaarka ah iyo kuwa gaarka ah. Maaddaama aan nahay dugsiga sare ee kulleejada hore, barnaamijkeenna tacliimeed waxaa loogu talagalay inuu u oggolaado ardayda dhammeeya manhajka inay kasbadaan shahaadada isku-xirnaanta, 60 + saacadaha amaahda kulleejada, iyo / ama shahaadooyinka warshadaha oo aan qiimo ugu fadhiyin qoysaska.
Iskuullada Hore ee Colorado Inverness waxay ardayda fasalada 9aad-12aad siisaa fursad ay ku bilaabaan ka shaqeynta koorsooyinka heerka kuleejka sida ugu dhakhsaha badan markay diyaar u yihiin kulleejada. Waxaan qiimeynaa arday kasta oo isdiiwaangaliya lana kulma ardayda meesha ay joogaan, heerkuu doono ha noqdee. Ardaydeenu waxay kasbadaan isku darka dhibcaha dugsiga sare iyo kuleejka markay raadinayaan dibloomada dugsiga sare iyo shahaadada Associate ama ka sare.
Dugsiga Sare ee CEC Inverness
Dr. Jay Egger - Madaxa Dugsiga
(720) 505-4010 - Weyn
(720) 404-5010 - Fakis
Nagala soco Bulshada si aad ugu xirnaato CEC Inverness. Saxiix wargeyskeena oo soo dejiso barnaamijka 'Infinite Campus' ee bilaashka ah si aad u hesho cusboonaysiinta iyo wararka.
Macluumaadka Tooska ah ee Kuleejka
Wararka ka imanaya CEC Inverness
Waxaa laga yaabaa 4, 2021Waxaa laga yaabaa 4, 2021
February 10, 2021Waxaa laga yaabaa 4, 2021
February 5, 2021February 11, 2021
February 5, 2021August 18, 2021
Ma dooneysaa inaad waxbadan barato si aad u hubiso in CECI ay ku habboon tahay qoyskaaga? Ka soo qaybgal mid ka mid ah kulankeena macluumaadka, shakhsi ahaan ama shiid ahaanba. Kooxdayada hogaamintu waxay bixisaa bandhig ku saabsan barnaamijyadeena, shaqaalaheena, dhaqanka anaguna waxaan u joognaa inaan ka jawaabno wixii su'aalo ah ee aad qabto. Dooro taariikh hoos ku qoran iyo RSVP maanta!
Hoggaamintayada, Ogolaanshaha, Talo-siinta, iyo Kooxaha tacliinta ee CEC Inverness waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo aaminay ee ah inaan gaarsiino saameyn togan oo cimri dheer ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo nolol ahaanba. Xubin kastaa way fahamsan tahay oo ay wadaageysaa fulinta Bayaanka Howlgalka CEC iyadoo la adeegsanayo kheyraad kasta oo suurtagal ah iyo in la dhiso beel xoog leh oo kaamil ah oo ay ka buuxaan sharaf isla markaana ay ku hogaamiso heer sare.
Kooxda Hogaaminta Inverness CEC
Dr. Jay Egger - Madaxa Dugsiga - View Profile
Dr. Julie Sale - Hormuudka Waxbarashada - View Profile
Candyce Miller - Agaasimaha Adeegyada Ardayda - View Profile
Shaqaalaha Taageerada Inverness ee CEC
Ashley Bose - Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga - View Profile
Jasmine Diasparra - Isuduwaha Shaybaarka Sayniska - View Profile
Julia Gasper - Shaqaalaha Bulshada ee Iskuulka - View Profile
Annette Kullmer - Miiska Hore - View Profile
Denise Lohmann - Tech Tech - View Profile
Marka la joogo CEC Inverness, waxaan fahamsanahay raadinta iskuulka saxda ah inay tahay waaya aragnimo shaqsiyeed iyo in nidaamka ogolaashaha badanaa cabsi gelin karo oo ay adagtahay in la raaco. Shaqaalaheena Ogolaanshaha waxay u heellan yihiin inay qoysaska ka caawiyaan inay fahmaan nidaamkayaga iyo inay taageero ka siiyaan go'aankaaga hore ee aad ku codsanayso isqorista illaa kullankaaga ugu horreeya ee la-talinta ah.
Kooxda Ogolaanshaha CEC Inverness
Mandy Jameson - Diiwaanhayaha - View Profile
At CEC Inverness, shaqaalaheena Talo siinta waxay ku dadaalayaan inay fahmaan oo ixtiraamaan u gaar ahaanta arday kasta iyo himilooyinkooda waxbarasho. Waxay garwaaqsan yihiin in dugsiga sare uu yahay xilli sahamin iyo in xiisaha iyo himilooyinka ardaygu si dhakhso leh isu beddeli karaan. Wacyigalintu waxay wadaa wada shaqaynta ay la leeyihiin arday kasta si loo abuuro Shaqo Shaqsiyeed iyo Qorshaha Tacliinta (ICAP) oo ku sii hananaysa himilooyinkooda waxbarasho, danahooda shaqo, iyo awooddooda.
Kooxda La-talinta Inverness ee CEC
Virginia Rodriguez - Lataliyaha Tacliinta & Shaqada - View Profile
Dorothy Smith - Lataliyaha Tacliinta & Shaqada - View Profile
CEC Inverness iyo wada-hawlgalayaasha kulliyadda ee la aqoonsan yahay waxay u heellan yihiin inay abuuraan beel ay wax ku bartaan inta ay nool yihiin iyo dhaqanka dugsiga kaas oo kobciya guusha tacliimeed iyo shaqsiyeed ee arday kasta. Hadday tacliin ahaan ka horreeyaan, saxan yihiin, ama ka hooseeyaan heerka fasalka - barnaamijyadeenna tacliimeed waxaa loogu talagalay inay u diyaariyaan ardayda dhammaan heerarka shaqada koorsada kulliyadda sida ugu dhakhsaha badan uguna hufan ee suurtogalka ah. Waxaan sameynaa dadaal kasta oo aan ku bixinno heerarka ugu sarreeya ee tacliinta iyo taageerada shakhsi ahaaneed ee ku hagidda ardayda xagga himilooyinkooda shaqo iyo inaan ka caawinno iyaga gaaritaanka himilooyinkaas iyadoo loo marayo ballanqaad, shaqo adag, iyo isla xisaabtan.
Kooxda CEC Inverness Academics
Graham Baughn - Macallinka cilmu-nafsiga - View Profile
Tracy Bravo-Zander-Macalin Spanish- View Profile
Dr. Jordi Casanova - Macallinka Xiddigiska & Fiisigiska - View Profile
Chad Hawkinson - Macalinka Ganacsiga & Isgaarsiinta - View Profile
Chelsea Hull - Macalin Ingiriis - View Profile
Amy Leach - Macalinka Kobcinta - View Profile
Allan Lerner - Macalinka Taariikhda - View Profile
Ryan Mead - Macalinka STEM - View Profile
Bill Penberthy - Macallinka Xisaabta - View Profile
Dr. Ian Rollins - Macallinka Muusikada - View Profile
Heather Ross - Macallinka ESS - View Profile
Kevin Ruskusky - Macallinka Dowladda - View Profile
Ben Simonds - Macallinka Sayniska - View Profile
Michelle Swanson - Macallin Ingiriis ah - View Profile
Dhacdooyinka CEC Inverness
CEC Inverness waxay siisaa ardayda cuntooyin dhowaan la sameeyay si toos ah banaanka jikada xerada. Guji xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato cuntooyinkeena cajiibka ah, iyo si aad u hesho xiriirinta foomamka qadada iyo macluumaadka bilaashka ah oo la dhimay.
Nolosha Ardayga ee CEC Inverness
Wada-hawlgalayaasha Kulliyadda la Aqoonsan yahay